TuuuLibrería: chipo, mabhuku akawanda sezvaunogona kukwana muruoko rwako | Zvazvino Zvinyorwa
TuuuLibrería: chipo, mabhuku akawanda sezvaunogona kukwana muruoko rwako
Kuongorora migwagwa yeMadrid nguva dzose kunounza kushamisika, kunyanya kana zvine chekuita netsika, hunyanzvi kana, kunyanya, mabhuku. Uye yaive Svondo mangwanani apo, ndichifamba ndichidzika nemugwagwa weCovarruvias, ndakasangana TuuuLibrería, chirongwa chakanakisa muchimiro chezvitoro zvakasiyana-siyana zvine mashandiro anotendera iwe mukana wekutora mabhuku mazhinji sezvaunogona mune rumwe ruoko kuchinjana nechipo.. Iwe unoda kuziva zvirinani nezve ichi chiitiko?
Mabhuku mazhinji, ese anofara
Kana iwe ukapinda muTuuuLibrería kune inodziya asi zvakare yakanyarara mhepo, imwe umo vashanyi vayo vanosimudzira iyo fungidziro iyo inozvarwa kana iwe ukanyatsotsvaga pakati pezvakavanzika nyaya, dzimwe nguva dzinopihwa nevamwe uye dzoshanduka kuita hupfumi hutsva kune avo vedu vanoda kuverenga.
Yakakamurwa kuita zvikamu zvakati wandei, kubva kuZvinyorwa muSpanish kusvika kuchikamu chevana, kuburikidza neNhoroondo yeNhoroondo kana Kuzvibatsira, TuuLibrería chirongwa chekunyora chine mahofisi maviri muMadrid (Covarruvias mugwagwa, muChamberí, uye mumugwagwa wePadilla, mudunhu reSalamanca) neBarcelona (iyo yepakati Planeta mugwagwa) iyo chinangwa ndechekutendera kuti unakirwe nekuverenga kutsva mukutsinhana nemupiro wakapusa.
TuuuLibrería's system iri nyore: vanotambira zvipo kubva kuvanhu vemabhuku izvo zvavasingachadi kana kuda uye, kana paine mamwe mazita ari mumamiriro akashata, zvirimo zvinodzokororwa kuburikidza nekambani yakasarudzika. Shure kwaizvozvo, mabhuku ese akafumurwa kune vaverengi vanozokwanisa kutora mabhuku mazhinji sezvavanokwana mune rumwe ruoko kuchinjisa mupiro kuti uiswe mubhengi renguruve. Mari inoshandiswa kuenderera mberi ichidzokorora mabhuku nekutsigira akasiyana mapurojekiti, kunyanya muzvikoro nemaraibhurari.
TuuuMaraibhurari Haina katarogu, asi mabhuku akapindirwa ayo, mukushayikwa kwerubatsiro rwekunze, anosimbiswa nemipiro yevaverengi vanogona kuenderera mberi nekugonesa kusangana kwakasarudzika umo, pamusoro pezvose, rudo rwemavara netsamba zvinokunda nyaya .
Uye zvechokwadi, chero munhu anoramba.
Iwe unofungei nezve iyi pfungwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » TuuuLibrería: chipo, mabhuku akawanda sezvaunogona kukwana muruoko rwako
Maria Guadalupe akadaro
Yakanaka imwe nzira yekuti vanhu vaverenge. Uye unakirwe neruzivo rwekuverenga!
Pindura María Guadalupe
25 mitsara yekuyeuka Arthur Conan Doyle
3rd chikamu chezviso? yemapurisa edu nematikitivha ekunyora.